धेरै फिल्ममा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको आमा बनेकी लक्ष्मी गिरीले श्वेता खड्कालाई यस्तो भनिन्। श्रीकृष्ण सुटिूङमै बिरामी हुन्थे (भिडियो हेर्नुस्) - Gaunbeshi
धेरै फिल्ममा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको आमा बनेकी लक्ष्मी गिरीले श्वेता खड्कालाई यस्तो भनिन्। श्रीकृष्ण सुटिूङमै बिरामी हुन्थे (भिडियो हेर्नुस्)
Posted on १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १७:०० Author Gaunbeshi Comment(0)
लक्ष्मी गिरी, उहाँ नेपाली, भोजपुरी, मैथली र नेपाल भाषा ९नेवार समुदायको भाषा० चलचित्रहरूमा चरित्र अभिनेत्री हुने पहिलो महिला कलाकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँको जन्म २०११ माघ ६ मा काठमाडौंको पशुपति क्षेत्र, देवपत्तन मा भएको हो ।
उहाँका पिताको नाम मुक्तिनाथ पौडेल र माताको नाम उजेली अधिकारी हो । उहाँ एक्लो सन्तान हो । लक्ष्मीले एक सयभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ । उहाँलाई ३ सय ७२ वटा टेलिश्रृंखलामा देखिसकिएको छ । मदनकृष्ण र हरिवंशको नाटक विज्ञापन को कूल ३ सय ८९ प्रदर्शनमा उहाँले २ सय ८९ पटक अभिनय गर्नुभएको छ । यसबाहेक उहाँले अभिनय गरेका नाटकको संख्या धेरै छ ।
‘विज्ञापन’ नाटककै प्रदर्शन र अन्य कार्यक्रमसहित उहाँले अमेरिकाका ३५ राज्य, बेलायतका ३ राज्य, हङकङका धेरै भाग, भारत आदि देश देख्ने मौका पाउनुभएको छ । कलाकारिताबाहेक उहाँले २०२८ देखि २०५१ सालसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कको जागिरे भएर बिताउनुभयो । बैङ्कको सहायक पदमा कार्यत हुँदा २०३८ सालमा बैङ्कको रजतजयन्तीका अवसरमा प्रदर्शित नाटकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेवापत दुई ग्रेड वृद्धि भयो । २०४२ सालमा नेपाल टेलिभिजनको औपचारिक प्रसारण सुरु भएयता निरन्तर नेटीभीमा अभिनय गर्ने महिलाकलाकार उहाँमात्रै हुनुहुन्छ । उहाँको पहिलो टेलिश्रृंखला अप्रील फर्स्ट हो । उहाँ साहित्यमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ ।
Posted on ५ माघ २०७७, सोमबार १२:३१ Author Gaunbeshi
एजेन्सी । विबाह एउटा पवित्र बन्धन हो । जस्मा दुई शरीर र एक मन हुन्छ । जुनीभरीलाई संगै जीउने बाचा कसम हुन्छ । एकअर्कालाई पर्दाको दुःख सुखको साथ हुन्छ । तर यो जमानामा प्राय विबाहर केवल पैसाकोलागी गरिएको पाईन्छ । भारतको झारखण्डमा पनि एक महिलाले केवल पैसाकैलागी तीनजना पुरषसंग विबाह गरेकी छन् । प्रियंका कुमारीले […]
‘एटीएम’मा राखेको १२ लाख रुपैयाँ मुसाले काटेर धुजा(धुजा बनाएपछि‘
Posted on ८ माघ २०७७, बिहीबार ०९:४९ Author Gaunbeshi
एजेन्सी । मुसाले एटीएममा राखेका १२ लाख रुपैयाँ पैसा काटेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । यो फोटो खुसेन्द्र शर्मा नामका एक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन् । उनले क्याप्सनमा लेखेका छन्,’एक अनौठो ब्रेकिङ न्युज, गुहावटीमा एक एटीएम मेसिनमा १९ मे का दिन २९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । टेक्निक खराबीका […]
प्रधानमन्त्री ओली २३ गते नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्दैछन् ?
Posted on १९ माघ २०७७, सोमबार ०९:१६ Author Gaunbeshi
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । आइतबार प्रचण्ड(नेपाल पक्षले काठमाडौंको माइतीघरमा आयोजना गरेको धर्नामा सहभागी हुदै पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘सुन्दैछु, ओलीले हिन्दुराज्य बनाउने कोसिसमा छन् । २३ गते हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्दैछन् भन्ने […]
२ वर्ष भित्र बृद्धभत्ता ५ हजार हुनेछ : माधव नेपाल
प्रिती जिन्टाले साहरुख खानलाई ५ करोड २५ लाख रुपैयाँमा किनेपछि‘….
अभिनेत्री नीता ढुंगाना र ज्योतिष हरिहर अधिकारी डेटिङका लागि भारतमा ! सार्वजनिक भयो यस्तो तस्बिर (भिडियो हेर्नुस्)
Posted on २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १०:०५ Author Gaunbeshi
भरतपुरमा भ्यान दुर्घटना हुदा २ जनाकोनिधन ७ यात्रु घाइते
Posted on २९ चैत्र २०७७, आईतवार १३:२७ Author punam punma
Posted on २२ पुष २०७७, बुधबार ०८:५८ Author Gaunbeshi
विवाहको ७ फेरा लिनु अगाडि गर्नैपर्ने ८ परीक्षण, नत्र जिन्दगी नै बर्बाद होला !
Posted on ६ बैशाख २०७८, सोमबार ०७:४७ Author punam punma
प्रधानमन्त्रीकाे दशैँ शुभकामनामा लिम्पियाधुरा बिनाको नक्सा !
श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरि चैत्र २३ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस
Posted on २३ चैत्र २०७७, सोमबार ०६:३९ Author punam punma